Ngwaọrụ Nchebe Onwe | Naanị ngbakwunye ọzọ maka PE / Latex / Nitrile / PVC gloves
Na-eduga Ngwa ahia na-ebupụ
Anyị na-enye ọrụ nkwụsị, ọtụtụ narị ndị ahịa tụkwasịrị anyị obi iji nye ha ngwaahịa dị elu
Uka Nrụpụta Dị!
Ngwaọrụ Nchebe Onwe
Otu ụlọ ọrụ Unidus (HK) na-enye ngwaahịa nchekwa dị elu na ọnụ ahịa ọnụ. Ime ngwaahịa nchekwa dị oke ọnụ maka igwe na-enweghị nsogbu na-abụkarị otu ebumnuche anyị. Ngwaahịa anyị dị maka ndị ahịa oge ọ bụla achọrọ ha, kedu ọnọdụ ọrụ kachasị njọ ha nọ na ya.
Dị ka onye na-emepụta ngwaahịa nchekwa na China, anyị na-enye nchekwa na nchekwa ahụike zuru oke iji melite nchekwa nke ebe ọrụ gị. Ọtụtụ iri puku mmadụ adaberewo na ngwaahịa anyị iji mee ka ebe ọrụ ha dị nchebe na ọ na-eme ka azụmahịa bụrụ nke zuru oke.
Anyị na-enyere aka ịkwụsị ọnụ ahịa gị dị ala site na ịnye gị asọmpi asọmpi na ngwaahịa anyị. Anyị na-enye ihe ngwọta kachasị mma iji ngwaahịa ziri ezi iji mezuo ihe ndị ahịa gị chọrọ na-enweghị mkpa iji mefu ego maka ịzụta ngwaahịa kwesịrị ekwesị.
Acree nwere osisi n'ichepụta ihe nke di na China na ntaneti nkesa na mba ahu dum. Anyị na-enye ihe karịrị ụdị 3000 + nke akụrụngwa nchedo onwe onye (PPE) na akụrụngwa.
Mgbe ekwenyesiri ike na nchekwa ndị ọrụ na gburugburu ebe ọrụ, ohere nke ịbawanye nrụpụta yana arụmọrụ ka elu. Ndị ọrụ gị ga-enwe obi ike ma nwee ike ilekwasị anya na ọrụ ahụ kama ichegbu onwe ha gbasara nchekwa na ọdịmma ha mgbe ha nọ n'ọrụ.
Ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe na Ngwaọrụ Nchedo Onwe Gị (PPE), na-arụpụta n'okpuru sistemụ njikwa akara siri ike nke ISO 9001: 2015 Standard. Ogo ngwaahịa gbaara dị iche iche mba ọkọlọtọ ma na-akwado site na a Strong R & D Team maka n'ihu mma na Product Quality.
Anyị ga-aza ajụjụ gị n’ime awa iri abụọ na anọ. Ndị otu ọkachamara na-ahụ maka nchekwa nchekwa nwere nkwado iji nye nkwado teknụzụ ka mma yana ndị otu ime ụlọ iji nyere gị aka ịhazi ngwaahịa.
Si na nke kacha mma
Anyị na-enye ihe ngwọta kachasị mma maka nchekwa na ngwaahịa na ọrụ zuru oke. Bịaruo anyị ka anyị nweta ego kachasị mma iji hụ na gburugburu ebe ọrụ na-enweghị ihe ọghọm.
Mọnde- Fraịde: 8: 00-18: 30 Hrs
(Ekwentị ruo 17:30 Hrs)
Satọde - 8: 00-16: 00
Isi :lọ Ọrụ: FLAT C, 9 / F, WLỌ NLỌ, NO.72-76, WO LOK Street SHEUNG WAN, HONG KONG
Ekwentị: + 86 512 56986025
Faksị: +86 512 58577588
Anyị Nwere Azịza Dị Ukwuu
Jụọ Anyị Ihe Ọ bụla
Ogologo oge ole ka imerela ngwaahịa PPE
Malite site na onye na-emepụta PE gloves, mgbe ihe karịrị afọ 10 gachara, ugbu a, anyị na-enye ihe karịrị ụdị 30 nke ngwaahịa PPE.
You na-anabata OEM obere ka ukwu
Ee, anyị nwere ike chepụta na n'ichepụta dị ka kwa ahịa requirements.We anabata OEM na obere buru ibu, anyị na-atụ anya ịzụlite azụmahịa ọnụ.
You ga-eme nyocha dị mma tupu mbubata ọ bụla?
Ee, maka usoro ọ bụla, anyị na-eme nyocha na usoro mmepụta dị iche iche, anyị ga-enwe ndị otu QA anyị pụrụ iche iji nyochaa ogo tupu ebupu ha.
Kedu ihe bụ njigide njirimara gị maka iwu enyere niile?
Anyị ga-aza mkpesa ndị ahịa na-eme n'ime awa 12, anyị ga-aza ajụjụ maka ụdị nsogbu niile.
Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ gị?
Nabata ịkwụ ụgwọ site na T / T (nnyefe ego), L / C na anya (nnukwu iwu) ..
Kedu maka oge nnyefe gị?
Nọmalị anyị nnyefe ọhụrụ iji n'ime ụbọchị 30, ma anyị na-eme ka push iji na obere oge.
Kedụ ka m ga-esi nweta ọnụego mmefu ego?
Nọmalị anyị nwere ike ịnye ntọala onyinye na ozi dịka eserese ma ọ bụ ndị na - achọpụta ngwaahịa. Nwekwara ike ịnweta isi okwu na foto, biko mara na mgbe enyere onyinye dị ka nke a, anyị nwere ikike ịgbanwe ọnụahịa ma ọ bụrụ na ekpughere ihe ọmụma na-amaghị ama.
Ọ bụrụ na enweghị m ike ịchọta ngwaahịa kwesịrị ekwesị m na-achọ site na weebụsaịtị gị?
Anyị chọrọ ịbụ isi mmalite gị maka ngwaahịa PPE. Anyị na-arụ ọrụ iji nye ngwọta nke na-enyere ndị ahịa anyị aka ịga nke ọma. Acree nwekwara ike inye aka mepụta ngwaahịa PPE na imekọ ihe ọnụ. N'okwu dị ụkọ na anyị abụghị ebe kachasị mma, anyị ga - enyere gị aka igosi gị n'ụzọ ziri ezi.
Deba aha na akwukwo ozi anyi
N'ebe a ị ga-enweta ozi ngwaahịa na ọnụego ọhụrụ anyị
Copyright 2012 - 2022 Acree | Ikike niile echekwabara | Kwadoro site na Acree
Ka anyị kpaa nkata
Muta otu anyi siri nye aka aha otutu 100 inweta ihe oma.